Hevitra diso diso
fanontaniana Hevitra diso diso
4 volana 3 herinandro lasa izay #1407 by Joetsaem
Izaho nametraka fotsiny ny vokatra KLAS. Rehefa manokatra ilay simulator ianao, dia mahita mazava tsara ny faritra rehetra, saika fotsy ary ny tranobe manondro ireo trano fandraisam-bahiny ihany no hita.
Ny tranombokim-pahaizana dia tsara toerana.
Nametraka ORBX Global, ORBX LC Amerika Avaratra, FreeMesh aho. Ny simulator dia P3d V 4.5.
Fotoana mamorona pejy: 0.165 segondra